လူ့ဂွစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူ့ဂွစာ
လူ့ဂွစာ
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Nov 11, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Short Story | 14 comments
ရခိုင်အကြောင်သတင်းတွေဖတ်ရင်း ပါတ်သက်ရာ ပါတ်သက်ကြောင်းလေးတွေကို သတိရသွားလို့ရေးဖြစ်သွားတာ..။ ကျနော့် အကြောင်းလဲ ပါတာပေါ့…။
ကျနော် ပြောခဲ့ ပါတယ် …မထင်မှတ်ဘဲ အချိန် ကျလာတော့ ၀ိဥာဉ်လောက ၊နာမ်လောက မှာ ၀င်ပါတ်သက်ခဲ့ ရတယ်လို့ ..။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိရိုးဖလာ ယုံကြည်မှုတွေကတော့ နယ်တော်ရှင် ရွာတော်ရှင် နဲ့ သိုက်တွေပါဘဲ…။
ကျနော်လဲ ဘယ်ပါရမီပါလာလို့ လဲဆိုတာ စဉ်းစားရင် ခေါင်းတောင်လည်တယ်..။ အခုတော့ ဒီအလုပ်တွေ မလုပ်တော့ပါဘူး…
အမျိုးသမီးရဲ့ ရွာလေးမှာနေခဲ့ တုန်းကပါ…။
ဌက်ဖျားဖြတ်ချင်လဲ…ကျနော့်ဆီ.. အရိုးကျိုးရင်…ရွာသူကိုင်ထားရင်၊ သရဲ သဘက်ပူးရင်၊ နတ်ပူး သိုက်ပူး…ဘုရားထီးတော်တင် အနှောက်အယှက်..စုံနေတာဘဲ..။
ဇာတ်နားလို့ အိမ်ပြန်ရောက်လဲ အေးဆေး မနေရ။ ဇာတ်ခေါင်းပြုတ်ချိန်လဲ အေးဆေး မနေရ…။ လက်ခံထားတဲ့ ပုံတွေလဲ ဖြောင့်ဖြောင့်မဆွဲရ..။ နောက်ဆုံး ကလေး မျက်နှာမမြင်နိုင်တာက အဆုံး လာကြတာဘဲ..။ ကိုယ်က ဆရာနာမည်လဲ မခံချင်ဘူး…
ငွေကြေးလဲ မယူဘူး…အိပ်စိုက်။ အိပ်စိုက်နဲ့ ကူညီရတာ စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး…။
အဓိက..အချက်က ကျနော့်အတွက် အချိန်…နားချိန်..။ မရှိသလောက်..။ အားကိုးတစ်ကြီးလာတော့လဲ အားနာတာရယ် သနားတာရယ်..။
ရွာလေးရောက်ကာစက ကျနော် ဘယ်လောက်များဝေးလဲဆို… အိမ်ဘေးကနေ ကောက်စိုက်ဆင်းကြတာ လူတွေအများကြီးဘဲ…ကျနော်က ရောက်စလဲဖြစ်..အံ့သြတာပေါ့…သူတို့ ကောက်စိုက်သူတွေမှာ လူတိုင်း တစ်ယောက်တစ်ခုစီ ကိုင်သွားကြတာ..။
ဒီတော့ မိန်းမကို ပြောတာပေါ့….
“ မင်းတို့ မွန်ပြည်နယ်ကလူတွေ လယ်ထဲဆင်းတာ ဦးရှင်ကြီးနတ် တင်ရလား…လူတိုင်း ကျောင်းဆောင်လေးတွေ ကိုင်ပြီး လယ်ထဲဆင်းကြတယ်” ဆိုတော့ မဒမ်က ထိတ်လန့် တကြီးနဲ့ ….
“ ကို…စကားကို အရမ်းမပြောနဲ့ …အဲဒါ ကျောင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူး….မျိုးဆောင့်ခုံ( စပါးပျိုးပင်လေးတွေ စုစည်းပြီးညီသွားအောင် ဒီခုံလေးပေါ် ဆောင့်ကြတာ) ” တဲ့ …
ကျနော်ကလွဲပြီဆို အဲဒီလို..။ တော်တော်တူတာကိုး..။ ထားပါတော့ ဒါက..။
ပြောချင်တာက ကျနော်နဲနဲ ကျပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စ……။
အိမ်မှာ တခါတလေ( ခဏခဏပါ) အိပ်ယာကတောင် မထရသေးဘူး…အိမ်ရှေ့ ခန်းမှာ ရောက်နေပါပြီ…တုန်နေပါပြီ… သိုက်ကတဲ့ ..။
သိုက်ဘဲ သိုက်နိုင်လွန်းတယ်ဗျာ…။ သူတို့ ရွာမှာ သိုက်ဆိုတာ ခရေဇီ ဘဲ.. ။ ဒီကောင်မလေးက သိုက်ထဲကလာတာတဲ့ ဆို…
တခါက ၁၀ ယောက်ကျော်တယ်…ပျိုပျိုအိုအို အကုန်လုံး တစ်ညီတည်း..လာပူးနေတာ..။
သိုက်ဆိုတာ စည်းကမ်းရှိပါတယ်…၀င်ချင်တိုင်းဝင် ထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့ ရတာမှ မဟုတ်တာဘဲ…။ မိဘတွေအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေပါ အတူပါလာကြတာ…ဂုဏ်ယူသော မျက်နှာတွေနဲ့ ပေါ့…။
ကျနော်က နာမ်လောက မရှိဘူးလို့ မပြောပါဘူး…ဒါပေမယ့် စုံမှိတ်ယုံတာ…ကိုလက်မခံဘူး….သရဏဂုံ ပျက်မယ့် အပြုအမူ၊
ဒီတော့ မေးတာပေါ့…“ ဘယ်သိုက်ကများ…လာခဲ့ ကြလဲ” ဆိုတော့…
အတိုင်းထက်အလွန် သိုက်ပြီးရင်းသိုက်နေတာ့ ကျနော်က ကျပ်ပြီ…။
“ အင်း…သိုက်ဆက်တွေ ဆိုတာ..နောက်ပွင့်မယ့် ဘုရားရှင်အတွက် ရည်မှန်းပြီး လှုဒါန်းကြဘို့ ရတနာပစ္စည်းကို စောင့်ရှောက်နေကြတယ်ဆိုတာတော့ ကောင်းပါတယ်…တစ်ကယ်တန်းဆိုတော့လဲ သိုက် ဆိုတာ ဘုတ် ပြိတ္တာ အနွယ်တွေ…စဉ်းစားကြ..
ကိုယ်က လူကြားမှာ ကျမက သိုက်ဆက်လေ…သိုက်ကလာတာ…သိုက်အနွယ်ဝင်လို့ ပြောတိုင်း…အနက်ကိုယူရင်တော့…
ကျမက ပြိတ္တာမကြီးပါ…ဘုတ်မကြီးပါ.တံထွေးနှပ်တို့ ကို မ၀ရေစာ ပင်ပန်းစွာ စားနေရတဲ့ပြိတ္တာ အဆက် ပြိတ္တာ အနွယ်ပါလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြနေတာ…ဟုတ်၇ဲ့ လားပြိတ္တာအပေါင်း ၊ဘုတ်မ အပေါင်းတို့ …”
စကားဆုံးတာနဲ့ တုန်တာတွေ ရပ်ပြီး.အိမ်ကနေ သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်နဲ့ ဆင်းသွားလိုက်ကြတာ… နောက် သိုက်တွေ သိပ်မလာရဲတော့ဘူး…။
နောက် တစ်ခုက တောင်ပိုင်အဘိုး…တဲ့ရွာ အပေါ်ဘက်က တောင်ကုန်းမြင့်လေးပေါ်က ဘုရားလေးမှာ ခဏခဏ လုပြီးကို ပူးကြ ၀င်ကြွကြတာ…အပြိုင်အဆိုင်ဘဲ…။
သူ့ မှာ ၀င်ကြွနေတာ…တောင်ပိုင်တဲ့ … အို…ငါ့မှာ ကြွတာက တောင်ပိုင်အစစ်….။ အဲဒီတောင်ပိုင်က ကျနော့်ဘက်လှည့်လာတာ…။
၀န်ကြီး တဦးရဲ့ အမက တောင်ပိုင်အဘိုးနန်းနဲ့ ရုပ်ထုလှုမယ်…အဘိုးရုပ်ထုကိုတော့ ကျနော်ထုလုပ်ပေးပါ..တဲ့။ ကျနော်လဲ ငြင်းလို့ မရပါဘူး…သားအမိလို ဖြစ်နေတော့ အလကားပဲတင်း ပညာဒါနပြုပါတယ်…
ရုပ်ထုတောင်မပြီးသေးဘူး…ကြွချင် ၀င်ချင်လွန်းလို့ လယ်ထဲကွင်းထဲကတောင် လာချောင်းပြီး နံပါတ်စဉ် ဘွတ်ကင်ချိတ်ကြတာ…။
ကျနော်ရုပ်ထုထုရင်း ရုပ်ထုအတွင်းရင်ဘတ်နေရာ အတွင်းထဲမှာ (သစ်ရွက်တစ်ရွက်)ခူးပြီး ထည့်မြှုပ်ထားခဲ့တာ…။
ရုပ်ထုပြီးလို့တောင်ပေါ်မှာ အလှုရှင်ရော၊ တောင်ပိုင် အဘိုး ပင့်မယ့်သူတွေရော အများကြီးဘဲ၊ စည်နေတာ ရွာသားတွေလဲ အများကြီး…။ ပထမ အလှုရှင် ထပြီး လှုဒါန်းတဲ့ အကြောင်းပြောတာပေါ့..။ နောက် ကျနော်ပြောရမယ့် အလှည့်….။
“ ကျနော်က ဒီရွာ ဇာတိမဟုတ်ပေမယ့်၊ ဒီရွာလေးကို ချစ်ပါတယ်..ဒီရွာကိုချစ်မှတော့ ဒီတောင်ပိုင်အဘိုးကိုလည်း ချစ်ပါတယ်…
ဒါကြောင့် ဒီအဘိုး ရုပ်ထုအတွက် ငွေကြေး တစ်ပြားမှ မယူဘဲ ပညာဒါနပြုတာပါ…
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ တောင်ပိုင်ကို သူများရွာကတောင်ပိုင်တွေနဲ့ မတူအောင် အဘိုးကိုယ်ထဲမှာ
သစ်ရွက်တစ်ရွက်ထည့်ထားပါတယ်…တစ်ကယ်လို့အဘိုးဝင်ကြွလာရင် ကျနော်က အဘိုးကိုမေးမယ်…အဘိုးကိုယ်ထဲမှာကျနော်ထည့်တာ ဘာအရွက်လဲ….လို့ ၊ အဘိုးတောင်ပိုင်က နတ်ဆိုတော့ သိကိုသိမှာပါ..ကျနော်ထည့်တာ အမှန်အတိုင်းပြောနိုင်ရင် အဘိုးအစစ်ဘဲ၊ ဒါသေချာရင် အဘိုး ဘာခိုင်းခိုင်း ကျနော် ပညာဒါန ထပ်ပြုပါဦးမယ်…”
ပွဲတာပြီးသွားတယ်..တောင်ပိုင်အဘိုး တစ်ယောက်မှ မကြွလာဘူး….။ နောက်လည်း တောင်ပိုင်းအဘိုးက အနေအထိုင်ဆင်ခြင်သွားတယ်… ဘုရားတောင်နဲ့ ကျနော့်အိမ်နဲ့ နီးတော့ အဘိုးတစ်ခါမှ ကို မကြွလာဘူး…။
ကျနော် ခရီးထွက်လို့ အိမ်မှာ မရှိမှ တောင်ပိုင်ကြွရဲတာ…။
အဲဒါက အသိအမြင်တွေ ကျယ်စေချင်လို့ ကျနော်ကျပ်ခဲ့ တဲ့ ကိစ္စ…။ ကျနော်က နဲနဲတော့ ရွတ်တယ်…။
အဲ…ကျနော့်ထက်ကိုရွတ်တာကို ရခိုင်မှာ တွေ့ ဘူး ကြားဘူးခဲ့တယ်…။
ရခိုင်ပြည်မှာတော့ ရွာတော်ရှင် အဘိုး ဆိုညောင်းထား…မလိုဘူး…လူရာမ ၀င်နတ်ရာမ၀င်ဘူး….။
အင်္ဂလန် အဆက်တွေလားတော့မသိဘူး… သူတို့ ဆီမှာက ရွာရှင်မက စတားဘဲ…။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရွာအရှင်မ က၊ အခရာ…အဓိက.။ အားလုံးက ရွာရှင်မဆို အသေ ကြောက်တာ…။
လှေမှောက်လဲ ရွာရှင်မ၊ ရေနစ်လဲ ရွာရှင်မ၊ ငါးမရလဲ ရွာရှင်မ၊ ဓါးထိုးလဲ ရွာရှင်မ ၊ဇာတ်က မီးစက်ပျက်တာလဲ ရွာရှင်မ…။
မင်းသမီးလေးဗိုက်အောင့်တာလဲ ရွာရှင်မ …။
ရွာတစ်ရွာမှာ ရွာရှင်မ တစ်ပါးရှိတယ်…ရွာအ၀င်တိုင်းမှာ ရွာရှင်မ သစ်ပင်နဲ့ ရွာရှင်မနန်းရှိတယ်…။
ရွာတစ်ရွာရဲ့ ရပ်ရေးရွာရေးကို ဆုံးဖြတ်နိုင်တာက ရွာရှင်မဘဲ…ရွာလူကြီး..ကောင်စီိလူကြီး.လား…သွား မြောင်းထဲကို။
အဲဒီလောက်ပွဲပြီးမီးသေတဲ့ ရွာရှင်မက တစ်နေ့ ကြွလာပြီး….အထူးအဆန်းပြောလာတယ်…။ ဒီတစ်ရွာလုံး ကပ်ဘေးမကြုံ အသေဆိုးနဲ့ မကြုံချင်ရင် ရွာတောင်ပိုင်းက လူကြီး( နာမည်မေ့) နဲ့ ရွာရှင်မ ပင်တိုင်ကြွသူနဲ့ လက်ထပ်မှ ရမယ်တဲ့..။
ရွာရှင်မ စကားအတိုင်း ရွာက လူကြီးသူမတွေ သွားပြောတာပေါ့….။
ဟိုက လက်မခံဘူး…အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူး…ဘာညာပေါ့။ ဟိုလူကြိးက မုဆိုးဖို…ရွာစွန်မှာ ခြံစိုက်ပြီး အေးဆေးနေတာ။
၁ခေါက်မရ ၂ခေါက်မရ၊ ၃ခေါက်ညှိမရတော့ ရွာရှင်မက တစ်ရွာလုံးကို သတ်တော့မယ် ကြိမ်းဝါးရောဗျာ…။ တစ်ရွာလုံး ပြဿနာတက်ပြီ…
ရွာအရှင်မစကားနားမထောင်တဲ့ဟိုလူကြီးကို ရွာကမောင်းထုတ်မယ်လုပ်ရော….။
ဟိုကလဲ သူ့ ဘာသာ နေလာတာ အခြေကျနေမှ ဒီလိုပြောလာတော့ စိတ်တိုတာပေါ့။ လက်မခံနိုင်ဘူး ပြောတော့ တစ်ခါတည်း မောင်းထုတ်မယ်လုပ်တာ…သူလဲ ခဏစဉ်းစားပြီး မှ ရွာရှင်မကို လက်ထပ်ပါမယ် လို့ ကတိပေးတော့တာ…။
ရွာရှင်မ ၀င်တဲ့ သူရော ရွာသားတွေရော ပျော်လိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ…။ သူတို့ အပျော် ၃ရက်တောင်မခံပါဘူး….။
၂ရက်မြောက်ပြီး မိုးလင်းတော့ ရွာထိပ်က ရွာရှင်မ ပိုင်တဲ့ သစ်ပင် အကြီးကြီး မရှိတော့ဘူး….ကိုင်းဖျားကိုင်းနားမပြောနဲ့အမြစ်တောင်မကျန်ဘူး….။ ဟိုလူကြီး ထင်းအဖြစ်ခုတ်ပြီး တပ်တောင်မြို့ က ထင်းဒိုင်မှာ သွားသွင်းလိုက်တာ..။
သတင်းအတိအကျရတဲ့ အတိုင်း ဘာလို့ လုပ်လဲ မေးတော့…နှီးဖြာ နေရာကနေ အေးဆေးဘဲ ပြန်မေးပါတယ်…
“ ငါနဲ့ ရွာရှင်မက ဘာတော်လဲ….”
“ ဦးလေးတို့ က လင်မယား….ဦးလေးက ရွာရှင်မလင်…”
“ အေး….ဒီအိမ်မှာ ငါ အိမ်ထောင်ဦးစီးဘဲ…ငါ့မိန်းမ ပိုင်တဲ့ အပင် ငါခုတ်တာ ဘာလုပ်ချင်လဲ..
ဘယ်ကောင်က မကျေနပ်လဲ ပြော…..ငါ့ မိန်းမနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ငါလုပ်တာ…
မယုံရင် ဒီမှာ ထိုင်နေတဲ့ ငါ့ မိန်းမကို ပင့်ခိုင်းပြီး ကြွလာရင် မေးကြည့်….
ကောင်မ ရီးတီးယားတား မလုပ်နဲ့ နော်… ဒီအိမ်မှာ ငါ အိမ်ထောင်ဦးစီး” တဲ့ ..။
ရွာရှင်မ ခေါင်းစွဲမိန်းမလဲ မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နဲ့ ။
ရွာသားတွေလဲ တစ်ခွန်းမှ မဟ ရဲတော့ဘူး… နို့ ..ရွာရှင်မက တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်တာ..။
ကဲ…..သူက ကျနော့်ထက်တောင် ရွတ်ပါတယ်ဆို…။
အဲဒီ အဘိုးကြီးနဲ့ ကျနော့်ကို တစ်ချို့ က ကွယ်ရာမှာခေါ်တာ…
“ လူ့ ဂွစာ ” တဲ့။
ထေရာဝါဒစစ်စစ် ဖြစ်စေချင်သော စေတနာနဲ့ …။
( သြော်…မေ့လို့ …အရှင်မနေတာက ကျောက်ဖြူမြို့ နဲ့ တပ်တောင်မြို့ ကြားက ရွာ…။
ကျနော် တောင်ပိုင် ရင်ဘတ်ထဲမှာ ထည့်ထားခဲ့တာက သရက်ရွက်…။ )
လူ ဂွစာ ဂျီးးးးးး
အနော်က လောက်လေးဂွ သိပ်လက်တည့် တာ။
အဟားမိုက်တယ်။ အဲလိုလူ့ဂွစာနဲ့တွေ့မှအေးရော။ အပေါ်ကတွေ့မရှောင်ကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်း တယ်။ ဝေါင်ဝေါင်းရှေး သူကမထင်မထင်သလို ဂျိုင့်နဲ့ကောက်ပေါက်တာရယ်။ ငိငိငိငိ
သူများက ၁၂ ကြိုးပဲ ကိုင်တာ။
သများက ၁၃ ကြိုးးးး
ရေငင်ဖို့ တစ်ကြိုး အပိုဆောင်ထားတာ။
နောက်တာပါ။ အမှန်တော့ သများက အိမ်ကျယ် အဲလေ အိန်ဂျယ် ပါ။
မူကြိုကျောင်းမှာ ကပွဲ တုန်းကပြောပါတယ်။
အဟိဟိ ..သိုက်မျိုး သိုက်နွယ်တွေ အဟိဟိ ….ကိုမင်းသား သမချက်ကတော့ ..အဟိဟိ ..
ဆြာဆော ညီးလဲ ကချင်သိုက်ကဆို
ကျော်က ခွစ်ရှန်ပါဆို….ကချင်သိုက်ကလာတာ…ဟိုမြစ်ကြီးနားသူ လေယဉ်မယ်ကြီး….အဟီးဟီး..ကျော်မဟုတ်….
ဆောရိုးဂျီး ဘာဂျီးခြုံလိုက်ရင် ဘာဂျီးဖြစ်သွားမုန်း မတိ!!!
ဘယ်ကလာ..တီသဲကလည်း ဆောရိုးက.. ဟိုသိုက်ကလာတာ…..
ကိုယ်တွေလို…အရမ်းချောမောခန့်ညားတဲ့လူတွေများ..ဘယ်ပို့စ်သွားသွား လိုက်ရန်လုပ်ခံရနေတယ်..အဟိဟိ ..ကိုမင်းသား…ကျော်အကုန်လုံးပြုစားပလိုက်မယ်ဂျာ…ရှုပ်တယ်…အဟိဟိ
ခုတော့ အိမ်ဦးနတ် ဖမ်းစားလို့ ဖျဉ်းစွဲစ ပြုတေပြီ ဆိုလားး ဗျာ.
ဟုတ်ပ ..ဒီရွာကရွာတော်ရှင်လည်း အိမ်ဦးနတ်နားကပ်နေပြီး ရွာထဲတောင်မ၀င်နိုင်ဖစ်နေပြီ..ခွိခွိ
ဦးလေး အငယ်ဆုံးလည်း တော်တော်ရွတ် တာ။ အမေဂျမ်း ၀င်နေတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို အမြင်ကပ်လို့ သားတော်လည်း အမေ့ကိုချစ်တာပဲဆိုပြီးအတင်းဝင်ဖတ်ပြီး ဖတ်နမ်းတာ အမေဂျမ်းလည်း ထွက်ပြေးရောတဲ့။ ပြီးတော့ ဒုတိယ ဦးလေးက ဂိုဏ်းဝင် ရွှေရင်ကျော်ဂိုဏ်းဆိုလား။ ဟီးး ဒီတစ်ခါတွေ့ရင် အင်တာဗျူးထားမယ် ပို့်စ်တစ်ပုဒ်ရအောင်။
လူ့ ဂွဇာ ဂ
လက်တွေ့ ကျကျ ရှင်းထည့်လိုက်တော့
အော် ရွာတော်ရှင်မက အဲဒီ လူ့ဂွစာကြီးကို ကြိတ်ချစ်နေတာလားမှမသိ။
အသွေးယူယူ အသားယူယူ သစ်ပင်ယူယူပေါ့။